Isku-darka Ilaalinta Jumlada 360 Jumlada Jumlada ah ee iPhone 12 Soosaaraha iyo Alaab-qeybiye | OTAO
● 360-degree Ilaalin Buuxda. Isku darka 1 daboolka dambe iyo 1 loox oo leh ilaaliyaha shaashadda oo la dhisay, 2-da 1 Combo wuxuu hubiyaa inuu si buuxda uga ilaaliyo taleefankaaga xoqida, qashinka iyo faraha, sidoo kale wuxuu taleefankaaga ka ilaaliyaa inuu saameyn ku yeesho ama dhibco nasiib darro ah.
● Ultra-khafiif ah & Iftiin. Kiis khafiif ah oo khafiif ah ayaa xajinaya dareenka dhabta ah ee taleefankaaga kumana dari doono wax weyn oo aad ku qaadan karto jeebkaaga ama boorsadaada si fudud. Cidhifyada isku dhafan ee jilicsanaanta iyo qallafsanaanta ayaa siinaya dadka isticmaala gacmo fiican iyo qabasho aamin ah.
● Naqshad Gaar ah. Loogu talagalay si gaar ah iPhone, kiisku wuxuu si sax ah ugu habboon yahay badhamada mugga, badhamada hawlgalka, iyo gooladaha taleefankaaga. Qalabka difaaca muraayadda muraayadda leh ee Premium wuxuu hubiyaa taabashada jilicsan, oo sahlan in la helo dhammaan astaamaha iyo badhamada iyada oo aan laga saarin kiiska.
● Taageerada Udirista Xarig-la'aanta: .Waxay taageertaa ku-dallaca lacag la'aanta ah iyada oo aan lagaa qaadin kiiska taleefanka. Naqshadeynta dekedda miisaanka culus oo saxan waxay bixisaa shaqooyin la hagaajiyay
Hore: IPhone 12 taxanaha 2.5D asturnaanta ilaaliyaha shaashadda muraayadda
Xiga: iPad Pro 11 ″ 2020 Ilaaliyaha Shaashadda Muraayadaha
iPhone 12 taxane 2X galaas qaboojiyaha oo jajaban ...
2.5D Anti Blue Light shidan Glass Screen Prot ...
2.5D High Clear Anti-Boodh qaboojiyaha Glass Glass ...